Ngokumangalisayo Uyilo lwe-imeyile eNtsha (Iyafuneka) | Martech Zone
NgoLwesithathu, Juni 25, 2008 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Douglas Karr
Nantsi enye i-imeyile endiyithandayo ukuyifumana, kodwa ihlala ingenzi nto nge! Le yi Downtown Indianapolis, i-imeyile eNtsha ngokumangalisayo.
Ndihlala ndibhalisile kuba ndiyathemba ukuba uyilo olutsha luya kuza-ulwazi ku khuthaza idolophu yaseIndianapolis Kukho konke, kodwa uyilo lwenza ukuba i-imeyile ingafundeki kwaye ingenakusebenziseka. Nasi isizathu:
Akukho siqhagamshelo siphambili kulwazi lwentloko kwiwebhusayithi eyiyo Iindleko zezabelo Indy Downtown Inc. Mhlawumbi oko kukongamela, kodwa ndicinga ukuba kuyayifuna ngokwenene.
Imifanekiso esezihlokweni incinci kwaye ayinamsebenzi- andikwazi ukuyenza. Uqikelelo lwam kukuba nabani na oyilele i-imeyile unesisombululo esincinci kunam mhlawumbi mhlawumbi akhangeleka emakhulu. Bathatha indawo exabisekileyo 'ngaphezulu kwesibaya'… indawo eneneni abantu unako jonga xa bevula i-imeyile kumxhasi wabo.
Umhlathi wokuqala ngasekhohlo, Ilizwi elivela kwi-IDI, sisihloko esibi kwaye asinyanzelisi. Mhlawumbi abantu abazi nokuba yintoni i-IDI?
Ubungakanani befonti buncinci, abufundeki, kwaye akukho zikhefu zomhlathi okanye iimbumbulu ezivumela amehlo am ukuba ahlole umxholo. Ngenxa yoko, andizange ndiyifunde! Umfanekiso wawungumnxeba omkhulu, nangona!
Iziganeko zekhalenda yeyona nto ilungileyo malunga nale imeyile, kodwa akukho fowuni yesenzo kwiziganeko… ndinike ikhonkco lokuthenga amatikiti kunye nokufumana ulwazi oluthe kratya kumnyhadala ngamnye ukuze ndiye! Andizukubona umcimbi apha kwaye ndiye kuzama ukukhangela kuGoogle. Andinaxesha lalonto!
Umxholo uyaphazanyiswa kwaye usikwe waba ziikholamu ezibhityileyo ngokungeyomfuneko. Abantu bakwimonitha ezinkulu ngoku ngezigqibo ezibanzi… yiya kwifomathi ebanzi yepikseli engama-800 ukuya kwayi-1000. Kuba ikhalenda yakho yindawo esecaleni, umsebenzisi akazukucinga ngokuskrola ngokuthe tye ukufikelela kwi-bar esecaleni emva koko uyifunde.
Iikholamu ziphindwe kabini
amagama kwaye kunjalo
Kufuneka ubuncinci umnxeba omnye omkhulu kwisenzo kwi-imeyile. Ngaba ufuna ukuba ndityelele iMakethi yesiXeko? Thenga itikiti lekonsathi? Ndinike umnxeba owodwa ukuba uthathe isenzo kunokuba ukhethe ama-40. Ndixelele ngaphezulu kwento enye kunazo zonke ezinye eziza kundisa apho.
Faka iphepha lokufika kunye neenkcazo ukuba ukhathazekile malunga negumbi. Bhala isicatshulwa esifutshane ngesixhumanisi 'sebali elipheleleyo' endizisa kwiphepha elinendawo yokuphefumla kunye nolwazi olongezelelweyo.
Iphi imifanekiso yabantu? Ukungabinazo iifoto zokuncuma zabantu kule imeyile kundenza ndizive ngathi ndifunda incwadana okanye inqaku leendaba. Iifoto zabantu abonwabela le micimbi kunye neendawo ezikwidolophu yedolophu yaseIndy ziya kudibana nam.
Kwenzeke ntoni kwiveki ephelileyo? Ungathini malunga nokuphindaphinda umcimbi okanye ishishini olinyusileyo kwi-imeyile kunye namanye amagqabantshintshi avela kubafundi malunga nexesha elimnandi ababenalo. Yenze ibe yeyakho!
Inqaku lam ayikokubethisa le imeyile. Njengoko benditshilo, igcwele ngolwazi olukhulu… mhlawumbi kakhulu! Kuyacaca ukuba abantu ababhale ikopi benze umsebenzi wabo wasekhaya- ifuna nje ukuboniswa okungcono ukuze abafundi bayisebenzise kwaye bayenze.
tags: amanqaku esemgangathweni adwordsAmanqaku akumgangatho weGoogle adwords.htaccessusetyenziso lwe logoiinkcazo ezihambayoengekho kwi-wwwumgangatho wenqakuSocial Media Marketingukuqinisekiswa kwewebhusayithiwww
Juni 25, 2008 ngo-7: 32 PM
Ukuba bendingabaqulunqi / ababhali be-imeyile bendiza kuphikisa. sika ikopi ubuncinane nge-1/2. Unokudibanisa amanqaku athile kwelinye iphepha lomxholo.
Indlela yokukhuphela okuninzi kwi-imeyile.